अब जीवनको कुरा गरौं ! « Media for all across the globe
हरितालिका तीज २०७७ को हार्दिक शुभकामना !
अब जीवनको कुरा गरौं !
जीवन अमूल्य छ। कहिले हाँसो त, कहिले आँसु – यो त प्रक्रिया न हो। जीवन अर्थात् जिन्दगीलाई यात्रासँग सहजै तुलना गर्न सकिन्छ। यात्रामा कतिपय कठिन त कति सरल बाटोहरु भेटिन्छन् – सबैभन्दा धेरै यात्रा गर्ने मानिसलाई सोध्नुहोस्? हर मानिसको जीवन चलिरहेको छ र यो त सधै चल्छ। जस्तै यात्रा जोडियो। यात्रा संयोग हो। यो सधै र सबैका लागि सुखद नै हुन्छ।
खुसी हुनेहरु अबस्य दुःखी पनि हुन्छन्। यो अनौठो हुदै, होइन। सुख र दुःख मिसियो भने तनाब पढ्छ। मानिस सधै सुख या दुःखमा हुनै सक्दैन। दैनिकी त पक्का फेरिन्छ। समय सबैका लागि तम्तयार हुन्छन् र छन्पनि। मात्र पालो कुर्ने हो? दिनपछि रात आउँछ भने झैँ। जीवनका धेरै पक्षहरू आफुमा नै निर्भर हुन्छन्। एकपटक सोच्नुहोस् त – वास्तवमै जीवन के रहेछ?
आजकाल प्रायः मानिसहरु ह्वाट्सएप र फेसबुक च्याट निकै नै अपडेट हुन्छन्। यस्तो जीवन त्यहाँ भेटिदैन? बरु चलचित्र र पुस्तकहरुमा मज्जाको जीवन भेटिन्छ। अहिले सजिलो छ। गुगल दिमाग प्रयोग गर्नुहोस्। यसको अर्थ अनलाइमा सबै भेटिन्छन्। पढ्नुहोस् – हेर्नुहोस् र फेरिपनि सोच्नुहोस्। साथीहरुलाई सोध्नुहोस्? जीवन कस्तो छ? कस्तो चलिरहेको छ? वास्तवमा उनीहरु एक शब्दमा जवाफ दिन्छन् र भन्छन् – गाह्रो छ, तनाब छ, अप्ठेरो छ। किन, प्रतिप्रश्न गर्नुहोस्? यस्तै त हो नि, आफ्नो त सोच जस्तो छैन। फलानोले घर बनायो, फलानोले जग्गा जोड्यो – तनाब छ। यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ – उनीहरु आफ्नो बारेमा सोच्ने फुर्सदमा नै छैनन्। बस् अरुकै बारेमा सोचिरहेका छन् र उनीहरुकै कुरा गर्छन्। जति खोजेपनि यहाँ जीवन कहिल्यै भेटिनेवाला छैन? किनकी, यहाँ यस्तै चलिरहन्छ…।
सिमानामा लडिरहेको सिपाहीलाई सोध्नुहोस् – जीवन कस्तो छ? आफ्नो परिवारको सपना त्यागेर करोडौंको परिवारलाई सुरक्षित राख्न खटिरहेको हुन्छ। जहाँ ब्यक्तिगत सपना थोरै र देशका सपनाहरु भारी हुन्छन्। ल… सोध्नुहोस् त? सीमाको सिपाहीलाई? पक्का, जवाफ तपाईको मन खेलिरहेको छ…।
नारीलाई जीवन कस्तो छ सोध्नुहोस् – जसले आफ्नो जीवनको बालापन र युवा अबस्था बाबु–आमाको समिप बिताउँछ। र फेरि नयाँ जीवन सुरु गर्न सम्पूर्ण जीवन अर्कै घरमा, अर्कैसँग लैजान्छ – हो उसलाई सोध्नुहोस् आखिर जीवन के रहेछ? यहाँ पनि तस्बिर आफै बोल्यो होला…।
जीवन कस्तो छ, आश्रममा राखिएका बाबु–आमालाई सोध्नुहोस् – जसका छोराछारीहरु मुलुक बाहिर वा शहरतिर छन्। यी बुबा–आमा तिनै जो पुरानो घरबाट नयाँ बाटो देखाए तर, आफै आश्रममा पुगे। कस्तो रहेछ – जीवन? आभास गर्नुहोस् त? अँह…।
जीवनका आआफ्नै व्याख्याहरु दिमागमा आउनेछन् – यदि, शान्त भएर सोचियो भने। त यो पनि जरुर छ कि, प्रत्येक मानिसको परिभाषा उसको स्थिति अनुरुप हुन्छ। जीवन पनि समय–समयमा परिवर्तन हुन्छ। समाज फरक र फराकिलो पनि रहेछ। सबैमा तर चीजप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आउँन जरुर देखिन्छ। ताकि जीवनमा सुन्दर र सरल भाब सुधार होस्। जीवन छोटो तर धेरै विशाल छ। यहाँ उतार–चढावहरू छन् र आइरहने छन्। ठुलो संसारमा जीवन अनिश्चित छ। र अब जीवनको कुरा गरौं…!
Strong earthquake shakes Greece and tumbles buildings in Turkey
Europe’s second wave of coronavirus – here’s what’s happening across the continent